एमालेका लालबाबु पण्डित र केकि अधिकारीलाई तीन महिना जेल हुन सक्ने ! – नेपाली सूर्य
एमालेका लालबाबु पण्डित र केकि अधिकारीलाई तीन महिना जेल हुन सक्ने !
December 30, 2017 December 30, 2017 Nepali SuryaLeaveaComment on एमालेका लालबाबु पण्डित र केकि अधिकारीलाई तीन महिना जेल हुन सक्ने !
सामान्य प्रशासन मन्त्री भएर चर्चा कमाएका पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले एक जना नायिकासँगको भेटमा १ हजारको नोटमा केरमेट गरेर सफा नोट नीतिको धज्जी उडाउका छन् ।
आफू सधैं कानूनको पालना गर्ने बताउँदै आएका पूर्वमन्त्री एवं मोरङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित सांसद पण्डितले अभिनेत्री केकी अधिकारीलाई १ हजार रुपैयाँको नोटमा हस्ताक्षरसहित केरमेट गरेर अटोग्राफ दिएका हुन् ।
पूर्वमन्त्री पण्डित विराटनगर १२ स्थित स्थानीय बखरी बगैंचामा बुधबार आयोजित एउटा नेपाली चलचित्रको प्रचार–प्रसार कार्यक्रममा मुख्य अतिथि थिए । सोही क्रममा पूर्वमन्त्री पण्डितले नायिका केकीलाई १ हजार रुपैयाँको नोटमा अटोग्राफ दिएका हुन् ।
नेपालमा सफा नोट नीति आएको जानकारी हुँदाहुँदै कागज मागेर हस्ताक्षर गर्दै अटोग्राफ दिनुपर्नेमा पूर्वमन्त्री पण्डितले नायिकाले दिएको १ हजार रुपैयाँको नोटमा अटोग्राफ दिए ।
पूर्वमन्त्री पण्डितले मात्र हैन, नायिका केकी अधिकारीले सफा नोट नीतिविरुद्ध १ हजार रुपैयाँको नोटमा केरमेट गराएकी छन् । पण्डितलाई देखेपछि केकीले हजारको सो नोटमा लालबाबुको अटोग्राफ लिएकी हुन् ।
सो कार्यक्रममा एमालेका नेता पण्डितले १ हजार रुपैयाँको नोटमा केरमेटसहित अभिनेत्री केकी अधिकारीको सुन्दरताको तारिफ गर्न पछि परेनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको सफा नोट नीतिअन्तर्गत नोट केरमेट गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यही नीतिअन्तर्गत नोट वा सिक्का जलाउने, गाल्ने, च्यात्नेलाई पनि सोही सजायको व्यवस्था छ ।
व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको फौजदारी संहितामा नोट केरमेट गर्नेलाई तीन महिना जेल सजाय वा ५ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सफा नोट नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको नाममा आदेश दिएपछि यो विषयलाई फौजदारी संहितामा समेटिएको हो ।
सर्वाेच्चले बैंक नोटमा स्टिच नगर्न, केरमेट नगर्न र जथाभावी च्यात्न नपाउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।मिडिया डवली
ब्लड क्यान्सर पीडित १० वर्षीया बालकको जीवन बचाइदिन सहयोगको गुहार – सेयर गरेर सहयोग गर्नुहोस
आमा भन्दै बाटो काटिरहेका आदित्यलाई ट्रकले मारिदियो’
November 18, 2017 Nepali Surya
एमाले – माओवादी एकता फाइनल, ओली र प्रचण्ड दुवै पार्टी अध्यक्ष
January 20, 2018 Nepali Surya